ကြေးဝါကို Chrome ကိုပန်းကန်အတိုင်းအတာ Fittings ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း - တရုတ်စက်ရုံ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > metallic Fittings > ကြေးဝါကို Chrome ကိုပန်းကန်အတိုင်းအတာ Fittings
ကျွန်တော်တို့ဟာ Self-operated အခွင့်အရေးများတင်သွင်းခြင်းနှင့်တင်ပို့ရှိသည်, အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်သောကြေးဝါ Valve, Bibcock, ထုတ်လုပ်ကျော်5နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကျနော်တို့လိုင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် Auto-စုဝေးလိုင်းထုတ်လုပ်ချီတက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်: သောကြေးဝါ Ball ကို Valve, ကြေးဝါ Angle Valve, ကြေးဝါ Bibcock ကြေးဝါတံခါး Valve သောကြေးဝါ Valve, ဒါကြောင့်အပေါ်ကြေးဝါကို Float Valve, ကြေးဝါ Fittings နှင့် Check ။ သင်ကမကြိုက်ဘူးဆိုလျှင်, skype တို့ကအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်: william2007856 ။
ကြေးဝါအချိန်ကို Chrome ပန်းကန်အတိုင်းအတာ Fittings ၏ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်
chrome fittings နှင့်နို့သီးခေါငျး၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေး - အစိုင်အခဲကြေးဝါ လုပ်. www.wenaptrade.com ကနေအကြမ်းခံသေးစတိုင်လျောက်ပတ်အဘို့မှာ chrome-ချထားတဲ့။ WENAP ဖြေရှင်းချက်ပေးထံအပ်နှံသည်မှာ chrome တူသောဆန်းသစ်ထုတ်ကုန်အဘယ်သူအားမျှမှဒုတိယကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပိုက် extension ကိုလျောက်ပတ်, ကြေးဝါ extension ကိုနို့သီးခေါင်း, တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုချထားတဲ့။ WENAP ထုတ်ကုန်ပြည့်စုံအင်ဂျင်နီယာနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်ကျွမ်းကျင်မှုကြေးဝါသငျ့ဈေးကွက်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံကိုကျော်ရရှိခဲ့အတူတသမတ်တည်းအရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ပြိုင်ဘက်ကင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တောင်းဆိုကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးထုတ်လုပ်ပေးအာမခံချက်နေကြသည်။
ကြေးဝါအချိန်ကို Chrome ပန်းကန်အတိုင်းအတာ Fittings ၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter
1/8 & quote ;, 3/16 & quote ;, 1 / 4A € ~,5/ 16â€ oe,3/ 8A €, 1 / 2A € oe,5/ 8A €™,3/ 4A € ~ 1 & quote; သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုမှုများအရသိရသည်။
BSPT, BSP, NPT, Metric Insight web studio ၏။
max မှကို C °-20Â။ + 160Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ကြေးဝါအချိန်ကို Chrome ပန်းကန်အတိုင်းအတာ Fittings ၏ကုန်ပစ္စည်း Feature ကိုများနှင့်လျှောက်လွှာ
2) ပစ္စည်း: သောကြေးဝါသို့မဟုတ်သွပ်အလွိုင်း
3) Size:3/ 8A €-3â€
4) အဆင့်မြင့် Forge technique ကိုအတူထုတ်လုပ်
1-3 ကွန်တိန်နာများအတွက် 25-30 ရက်အတွင်း 6) Prompt ကိုဖြန့်ဝေ
7) က Surface ကုသမှုသောကြေးဝါမျက်နှာပြင်, Nickle ပန်းကန်မျက်နှာပြင်, Chrome ကိုပန်းကန်မျက်နှာပြင်
လျှောက်လွှာ:ရေ, ရေနံ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့စသည်တို့ကို
ကြေးဝါအချိန်ကို Chrome ပန်းကန်အတိုင်းအတာ Fittings ၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး:အစိုင်အခဲစက္ဏူထူအတွက်ထုပ်ပိုးပြီးတော့ pallet ပါစေ။ အမြောက်အများအတွက်, ဖောက်သည်နှုန်းအဖြစ်€™ s ကိုâလိုအပ်ချက်များ။
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း: Sea transportation and air transportation or according to customer€™ s ကိုâ requirements.
hot Tags:: ကြေးဝါကို Chrome ကိုပန်းကန်အတိုင်းအတာ Fittings, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, လက်ကားတရုတ်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်းစက်ရုံ, ဝယ်, ဖောက်သည်စတော့အိတ်များတွင်အစုလိုက်, စျေး, Pricelist, စျေးနှုန်း, High Quality
ကြေးဝါကို Chrome ကိုပန်းကန်တိုးချဲ့မှု Fittingsကြေးဝါကိုဝက်အူ Fittings ၏ extensionChrome ကိုပန်းကန်ကြေးဝါကိုတိုးချဲ့နို့သီးခေါငျး fittings